ထသက အသစ်လျောက်ရန်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာမ်းတွေကဘာတွေလိုပါသလဲ။ အွန်လိုင်းကလျောက်လို့ရလားသိချင်လို့ပါ.
Answer : ခုေလာေလာဆယ္ မရေသးပါဘူး၊ ဖုန္းနံပါတ္ 01-388294 ကိုဆက္ေပးပါရွင့္
နိုင္ငံျခားသားပိုင္Company က ထကသ ေလ်ွာက္လို့ ရပါသလား
Answer : ရပါတယ္ရွင့္
Fully Online လိုင်စင်​လျှောက်တာ (Section(1) နယ်စပ်) အကြောင်းမပြန်သေးလို့ပါ ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမလဲ
Answer : 067408487 ကိုဆက္ေပးပါရွင့္
I would like to know, if REX registration permit time one year full. Do we need to extend?
If we need to extend, what things are needed?
Answer : Please call 0673408233 for REX system.
How to extension trade net member
Answer : 1.You can download application form at www.myanmartradenet.com အသင္း၀င္ရန္ 2.exporter importer registration card and smart card original scan After that send email to [email protected]
What is Online Pin Code?
Answer : Pin Code is from MCB bank. It's for online payment.
ထသက သက်တမ်းတိုး ၊ ဖုန်းနံပါတ် email address ပြောင်းချင်လို့ online က တင်လို့ရမလား
Answer : Can not get online now. Please call 01-388294
ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်း သင်္ဘောအဝင်အထွက် List လေးက မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့ကစပြီး update မတင်ပေးတော့လို့ပါ။ အခြားဘယ်နေရာတွေမှာများ ကြည့်လို့ရနိုင်သေးလဲ သိချင်ပါတယ်။
Answer : mpa.gov.mm မွာျကည့္လို့ရပါတယ္ရွင္
ထိုင်းန,်စပ် တရုပ်န,်စပ်မှ တဆင့်သွားသော Export များကို ရန်ကုန်ကနေ လှမ်း custom process ကို လုပ်လိုဥရမရ သိချင်ပါတ,် အခု online ကနေရော ရနေပါြပီးလား
Answer : ္for customs process please call to customs phone no 01-379428/29
Trade net member ကသက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိလဲဗျ သက်တမ်းကုန်ရင်ကောသက်တမ်းတိုးဖို့ဘာတေလိုလဲသိချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ
Answer : 1 year ပါရွင္။သက္တမ္းတိုးဖို့ www.myanmartradenet.com အသင္း၀င္ရန္မွာ application form ကိုယူပါ exporter importer registration card and smart card original scan တို့ကို [email protected] ကို mail ပို့ေပးပါ
Foreign company htathaka license fees
Answer : Please call 01-388294 for htathaka.
Why it is necessary to apply smart card?
Answer : Please call 01-388294 for smart card.
How the import sections are defined ?
Answer : section 1 ေဆးနဲ့ေဆးပစၥည္း။ တိရိစာၦန္ေဆး၀ါး ေဆးရံုသံုးစက္ပစၥည္း section2စားသံုးဆီ။စားအုန္းဆီ တာယာ လူသံုးအိမ္သံုးပစၥည္း section3ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္း ဘိလပ္ေျမ ကတၱရာ section4စားေသာက္ကုန္၊ကုန္ျကမ္း section5ယာဥ္ ယနၱရား အပိုပစၥည္း section6စက္မွုကုန္ျကမ္း စက္ဆီေခ်ာဆီ section7စက္နွင့္စက္ပစၥည္း section C CMP ပစၥည္း
google authenticator ကိုဖုန်းမှာသွင်းပြီး computer က tradenet နဲ့လည်းချိတ်ပြီးပြီ successful message လည်းရပြီးပြီ ဖုန်းကapplication က has been stop ဆိုပြီး error တက်ပြီးပိတ်ပိတ်ကျသွားလို့ software ကိုပြန်ထုတ် ဖုန်းကို reset လုပ်ပြီး google authenticator software ကိုပြန်သွင်းပြီးအသုံးပြုတော့ computer က QR code ပြန်ဖတ်မဲ့နေရာကပေးမထားတော့ဘူး အဲလိုဘယ်လိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရပါမလဲရှင်
Answer : Please call to 01-371219 at office hours.Thanks
Google Aunthenicator Application မွ Scan ဖတ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ဂဏန္းေတြ ဖ်က္မိလိုက္ပါတယ္
ဂဏန္းထပ္ေတာင္းေတာ့ Scan ဖတ္ဖို႔ မရွိေတာ့လို႔ ဘယ္လိုျပန္လုပ္ရမလဲဆိုတာ ရွင္းျပ ေပးပါခင္ဗ်ာ
Answer : Please call 01-371219, 01-375668 in office hour.
Answer : You need scan only one first time. You have to verify fist6digits. After you get successfully message, you can use continue. If you not clear call to 01371219, 01375668 in office hour.